Tag: Baaq | Sagal Radio Services
Madaxweyne Xasan "Afrikaay naga taageera ka gudbidda carqaladaha ammaanka dalkeenna"
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh ayaa weydiistay madaxda dalalka Afrika inay dalkiisa ka caawiyaan dagaalka uu kula jiro burcadbadeedda, argagaxisida iyo dhibaatooyin kale oo caqabad ku ah in Soomaaliya ay deggenaasha hesho.
Guddiga xaquuqul Insaanka ee Baarlamanka oo dalbaday in Wariye Koronto la sii daayay
Gudiga xuquuqul Insaanka Baarlamaanka ayaa ka hor yimid xukunkii xabsiga ee Maxkamada Gobolka Banaadir ay ku riday Wariye C/casiis Koronto iyo haweeneydii dhibanaha aheyd ee la kufsaday.
HRW iyo CPJ oo dalbaday in la sii daayo wariye Koronto iyo dadka lala soo xirey
Hay’adda xaquuqul insaaka ee Human Rights Watch iyo guddiga difaaca wariyayaasha ee CPJ, ayaa si wada jir ah maanta uga dalbaday dowladda Soomaaliya inay sii deyso wariye C/casiis Cabdi Nuur Koronto iyo dadka la xiran ee la xiriirta baahinta war kufsi ku saabsan.
Tarsan oo ugu baaqay in dadka laga heysto hanti ay la yimaaddaan caddeymo si loogu soo celiyo waxa ka maqan
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Md. Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), ayaa sheegay haddii ay jiraan dad guryo ay leeyihiin xoog looga heysto magaalada Muqdisho ay la yimaaddaan caddeymo iyo dukumiintiyo muujinaya lahaanshiyaha guryahaasi, ay markaasi dowladda Soomaaliya u soo dhicin doonto xaqa ka maqan muwaaddinka.
Galmudug oo ku baaqday in laga taageero qaadidda Jidgooyooyin iyo howl galinta dekadda Hobyo
Maamulka Galmudug, ayaa ka dalbaday ganacstada deegaannada maamulkaasi iyo qeybaha bulshada inay ka taageeraan sidii uu maamulku u qaadi lahaa jidgooyooyin fara badan oo yaalla inta u dhaxeysa deegaannaada Galinsoor iyo Gaalkacyo, kuwaas oo lacago looga qaada gaadiidka dadweynaha.